Norway oo sharciga kala noqonaysa qaxootiga u safra wadankii hooyo | Somaliska
Dowlada Norway ayaa heshiis cusub oo ay la gashay mucaaradka waxaa lagu sheegay in qaxootiga fasaxa ugu safra wadankii ay ka yimaadeen laga ceshan doono sharciga degaananshaha. Wasaarada cadaalada Norway ayaa sheegtay in qofka u safra wadankii uu ka soo cararay loo aqoonsan doono mid aan u baahnayn magangalyo, isla markaana laga ceshan doono sharciga.
Sidoo kale Norway ayaa waxay bixin doontaa sharci ku meel gaar ah oo 5 sano ah, inta qofka aan la siin sharciga rasmiga ah. Shaqaalaha ka shaqeeya arimaha soo dhaweynta qaxootiga ayaa horay cabasho uga muujiyay in qaxootiga markii sharciga la siiyo qaarkood ay dhowr bilood ka dib u safraan wadankii ay ka soo carareen, taasoo ay ku tilmaameen in ay muujinayso in aysan dhibaato weyn ka jirin dhulkooda.
Norway ayuu horay uga jiray sharciga faraya in uusan qofka qaxootiga ah u safri karin wadankii uu ka soo cararay, taasoo la mid ah Sweden balse hada ayaa dowlada Norway cadaysay in dhamaan dadka u safra wadankii ay ka soo carareen laga ceshan doono sharciga. Waxaa keliya oo laga reebay sharciga cusub haddii booqashadu ay la xiriirto qofka familkiisa oo ku xanuunsanyahay wadankii ama ku geeriyooday halkaasi.
Arinta ku saabsan mamnuuca qaxootiga u safraya wadankii ay ka yimaadeen ayaa ah mid la fahmi karo, maadaama shuruudaha lagu bixiyo sharciga ay ka midtahay in haddii qofka uu ku laabto wadankiisii ay dhibaato ku dhacayso. In Sweden ay raaci doonto wadada Norway iyo in kale ayaa la wada sugi doonaa.
xisbiga kataliso norway waa cunsuriyin ajanibta iyo musliminta aad u neceb qasatan soomalida. Marka layaab maleh. Weliba boqolaal qof oo somali o ilaa 10 iyo 15 sano norway kunoolaa ayee passporkii norway kala noqonayaan sababta o ah wexey kaga shakiyeen ineey been sheegeen waqtigii ey isdhiibeen tobaneyo sano kahor..Sverigedemokraterna iyo xisbiga norway kataliso ayaa isku fikrad ah.
Adigu sweden ban kugu ogayne norweyna mad uu talowday